December 2017 – Dhammadīpa
Posted on 23 Dec 2017 by Ashin Sopāka
“Recollecting this,amortal
and after death he rejoices in heaven.” – AN 4.61
“Bhuttā bhogā bhattā bhaccā,
Vitiṇṇā āpadāsu me;
Atho pañcabalī katā;
“Yadatthaṁ bhogaṁ iccheyya,
“Etaṁ anussaraṁ macco,
ariyadhamme ṭhito naro;
Idheva naṁ pasaṁsanti,
ငါသည် စည်းစိမ်တို့ကို သုံးဆောင်ခဲ့ပြီ၊ (မိဘတို့ကို) လုပ်ကျွေးခဲ့ပြီ၊ (သား မယားတို့ကို) မွေးမြူခဲ့ပြီ၊ ဘေးရန်တို့ကို လွန်မြောက်ခဲ့ပြီ၊ အထက်နတ်ပြည်၌ ဖြစ်စေတတ်သော အလှူကို ပေးလှူခဲ့ပြီ၊ ထို့ပြင် ငါးမျိုးသော ပူဇော်မှုကိုလည်း ပြုခဲ့ပြီ၊ သီလရှိကုန် (ကိုယ် နှုတ် နှလုံးကို) စောင့်သုံးကုန်သော မြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်သုံးသူတို့အား လုပ်ကျွေးခဲ့ပြီ။
အိမ်၌နေသော ပညာရှိသူသည် အကြင် အကျိုးငှါ စည်းစိမ်တို့ကို အလိုရှိရာ၏၊ ထို အကျိုးသည် ငါ့အား အစဉ်ရောက်ပြီ၊ နောင်တစ်ဖန် မပူပန်စေတတ်သော အမှုကို ငါသည် ပြုခဲ့ပြီ။ ထို အခြင်းအရာကို အဖန်ဖန်အောက်မေ့သော လူသတ္တဝါသည် အရိယာတို့၏တရား၌ တည်၏၊ အရိယာတို့၏တရား၌ တည်သော သူကို ဤဘဝ၌ပင်လျှင် ချီးမွမ်းအပ်ကုန်၏၊ တမလွန်ဘဝဝယ် နတ်ပြည်၌ မွေ့လျော်ရလေသတည်း။
“Tài sản ta thọ hưởng,
Trên cảnh giới chư Thiên.”
Wood Pigeon ©Ashin Sopāka 2017
Posted in Dhamma	| Tagged dhamma, laylife
Pure Verbal Action
Posted on 16 Dec 2017 by Ashin Sopāka
“And how is one made pure in four ways by verbal action? There is the case whereacertain person, abandoning false speech, abstains from false speech. When he has been called toatown meeting,agroup meeting,agathering of his relatives, his guild, or of the royalty, if he is asked asawitness, ‘Come & tell, good man, what you know’: If he doesn’t know, he says, ‘I don’t know.’ If he does know, he says, ‘I know.’ If he hasn’t seen, he says, ‘I haven’t seen.’ If he has seen, he says, ‘I have seen.’ Thus he doesn’t consciously tellalie for his own sake, for the sake of another, or for the sake of any reward. Abandoning false speech, he abstains from false speech. He speaks the truth, holds to the truth, is firm, reliable, no deceiver of the world. Abandoning divisive speech he abstains from divisive speech. What he has heard here he does not tell there to break those people apart from these people here. What he has heard there he does not tell here to break these people apart from those people there. Thus reconciling those who have broken apart or cementing those who are united, he loves concord, delights in concord, enjoys concord, speaks things that create concord. Abandoning abusive speech, he abstains from abusive speech. He speaks words that are soothing to the ear, that are affectionate, that go to the heart, that are polite, appealing & pleasing to people at large. Abandoning idle chatter, he abstains from idle chatter. He speaks in season, speaks what is factual, what is in accordance with the goal, the Dhamma, & the Vinaya. He speaks words worth treasuring, seasonable, reasonable, circumscribed, connected with the goal. This is how one is made pure in four ways by verbal action.” – AN 10.176
“Kathañca, cunda, catubbidhaṁ vācāya soceyyaṁ hoti? Idha, cunda, ekacco musāvādaṁ pahāya musāvādā paṭivirato hoti. Sabhaggato vā parisaggato vā ñātimajjhagato vā pūgamajjhagato vā rāja­kula­maj­jha­gato vā abhinīto sakkhipuṭṭho: ‘ehambho purisa, yaṁ jānāsi taṁ vadehī’ti, so ajānaṁ vā āha: ‘na jānāmī’ti, jānaṁ vā āha: ‘jānāmī’ti, apassaṁ vā āha: ‘na passāmī’ti, passaṁ vā āha: ‘passāmī’ti. Iti attahetu vā parahetu vā āmisa­kiñcik­kha­hetu vā na sampajānamusā bhāsitā hoti. Pisuṇaṁ vācaṁ pahāya, pisuṇāya vācāya paṭivirato hoti—na ito sutvā amutra akkhātā imesaṁ bhedāya, na amutra vā sutvā imesaṁ akkhātā amūsaṁ bhedāya. Iti bhinnānaṁ vā sandhātā sahitānaṁ vā anuppadātā samaggārāmo samaggarato samagganandī samaggakaraṇiṁ vācaṁ bhāsitā hoti. Pharusaṁ vācaṁ pahāya, pharusāya vācāya paṭivirato hoti. Yā sā vācā nelā kaṇṇasukhā pemanīyā hadayaṅgamā porī bahujanakantā bahujanamanāpā, tathārūpiṁ vācaṁ bhāsitā hoti. Samphappalāpaṁ pahāya, samphappalāpā paṭivirato hoti kālavādī bhūtavādī atthavādī dhammavādī vinayavādī; nidhānavatiṁ vācaṁ bhāsitā hoti kālena sāpadesaṁ pariyantavatiṁ atthasaṁhitaṁ. Evaṁ kho, cunda, catubbidhaṁ vācāya soceyyaṁ hoti.”
စုန္ဒ အဘယ်သို့လျှင် နှုတ်ဖြင့် စင်ကြယ်မှုသည် လေးမျိုးဖြစ်သနည်း။ စုန္ဒ ဤလောက၌ အချို့သော သူသည် မဟုတ်မမှန် ပြောခြင်းကို ပယ်၍ မဟုတ်မမှန် ပြောခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်သူ ဖြစ်၏၊ သဘင်သို့ ရောက်သော်လည်းကောင်း၊ ပရိသတ်သို့ ရောက်သော်လည်းကောင်း၊ ဆွေမျိုးတို့အလယ်သို့ ရောက်သော် လည်းကောင်း၊ အသင်းအလယ်သို့ ရောက်သော်လည်းကောင်း၊ မင်းမျိုးအလယ်သို့ ရောက်သော် လည်းကောင်း “အိုယောကျာ်း လာလော့၊ သင်သိသမျှကို ပြောလော့”ဟု သက်သေခေါ်ဆောင် အမေးခံရလျှင် ထိုသူသည် မသိသည်ကို “ငါမသိ”ဟုလည်းကောင်း၊ သိသည်ကို “ငါသိ၏”ဟုလည်းကောင်း၊ မမြင်သည်ကို “ငါမမြင်”ဟုလည်းကောင်း၊ မြင်သည်ကို “ငါမြင်၏”ဟုလည်းကောင်း၊ ဤသို့ မိမိအကြောင်းကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ သူတစ်ပါးအကြောင်းကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ လာဘ် ‘အာမိသ’ တံစိုးဟူသော အကြောင်းကြောင့်သော်လည်းကောင်း သိလျက် အမှားမပြောတတ်သူ ဖြစ်၏။ ကုန်းစကားကို ပယ်၍ ကုန်းစကားမှ ရှောင်ကြဉ်သူ ဖြစ်၏။ ဤသူ့ထံမှ နားထောင်၍ (ထိုသူတို့နှင့်) ဤသူတို့ ကွဲပြားရန် ထိုသူတို့ထံ၌ မပြောတတ်၊ ထိုသူတို့ထံမှ နားထောင်၍ (ဤသူတို့နှင့်) ထိုသူတို့ ကွဲပြားရန် ဤသူတို့ထံ၌ မပြောတတ်၊ ဤသို့ ကွဲပြားသူတို့ကိုလည်းစေ့စပ်တတ်၏၊ ညီညွတ်သူတို့ကိုလည်း အားပေးတတ်၏၊ ညီညွတ်ခြင်း၌ မွေ့လျော်တတ်၏၊ ညီညွတ်ခြင်း၌ ပျော်ပိုက် တတ်၏၊ ညီညွတ်ခြင်းကို နှစ်သက်တတ်၏။ ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းသော စကားကို ပယ်၍ ရုန့်ရင်း ကြမ်းတမ်းသော စကားမှ ရှောင်ကြဉ်တတ်သူ ဖြစ်၏၊ အကြင်စကားသည် အပြစ်ကင်း၏၊ နားချမ်းသာ၏၊ နှစ်လိုဖွယ်ရှိ၏၊ နှလုံးသို့သက်ဝင်၏၊ ယဉ်ကျေး၏၊ လူအများ နှစ်သက်၏၊ လူအများနှစ်ခြိုက်၏၊ ထိုသို့သော သဘောရှိသော စကားကိုသာ ဆိုတတ်သူ ဖြစ်၏။ ပြိန်ဖျင်းသော စကားကို ပယ်၍ ပြိန်ဖျင်းသော စကားမှ ရှောင်ကြဉ်တတ်သူဖြစ်၏၊ (သင့်သော) အခါ၌သာ ဆိုလေ့ရှိ၏၊ဟုတ်သည်ကိုသာ ဆိုလေ့ ရှိ၏၊ အကျိုး (နှင့်စပ်သောစကား) ကိုသာ ဆိုလေ့ရှိ၏၊ တရား (နှင့်စပ်သော စကား) ကိုသာ ဆိုလေ့ရှိ၏၊ အဆုံးအမ (နှင့်စပ်သောစကား) ကိုသာ ဆိုလေ့ရှိ၏၊ (သင့်လျော်သော) အခါ၌ အကြောင်းနှင့်တကွ အပိုင်း အခြားရှိ၍ အနက်နှင့် ပြည့်စုံသဖြင့် မှတ်သားလောက်သော စကားကိုသာ ဆိုတတ်သူ ဖြစ်၏။ စုန္ဒ ဤသို့လျှင် နှုတ်ဖြင့် စင်ကြယ်မှုသည် လေးမျိုးဖြစ်၏။
“Như vậy, này Cunda, tịnh hạnh về thân có ba. Và này Cunda, thế nào là tịnh hạnh về lời có bốn? Ở đây, này Cunda có người đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, đến chỗ tập hội hay đến chỗ chúng tội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, hay đến giữa các vương tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: “Này người kia, hãy nói những gì người biết”. Nếu không biết, người ấy nói: “Tôi không biết”. Nếu biết, người ấy nói: “Tôi biết”. Hay nếu không thấy, người ấy nói: “Tôi không thấy”. Nếu thấy, người ấy nói: “Tôi thấy”. Như vậy lời nói của người ấy không trở thành cố ý vọng ngữ, hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một vài quyền lợi gì. Ðoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đi đến chỗ kia nói, để sanh chia rẽ ở những người này; nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này, để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy người ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ hòa hiệp, thích thú hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Ðoạn tận lời nói độc ác, từ bỏ lời nói độc ác, những lời nói nhu hòa, êm tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui ý nhiều người, người ấy nói những lời như vậy. Ðoạn tận lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, nói có ý nghĩa, nói Pháp, nói Luật, nói những lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp thời, nên lời nói thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, lợi ích.”
Top: Red Bellied Woodpecker
Center: Pileated Woodpecker
Bottom: Downy Woodpecker
Posted in Dhamma	| Tagged dhamma, kamma, right speech, verbal action
Posted on9Dec 2017 by Ashin Sopāka
Sīha asked the Lord: “Is it possible, Lord, to see the results of generosity?” And the Lord said: “Yes, it is possible to see the results of generosity. The giver, the generous one, is liked and dear to many. This isaresult of generosity that is observable. Good and wise people follow the generous person. This isaresult of generosity that is observable. The generous person earnsagood reputation. This also isaresult of generosity that is observable. Once again, in whatever company he enters, be it nobles, brahmins, householders or monks, the generous person enters with confidence and without trouble. This isaresult of giving that is observable. And finally, the giver, the generous person, is reborn in heaven after death. This isaresult of generosity that can only be seen hereafter.” – AN 5.34
Ekamantaṁ nisinno kho sīho senāpati bhagavantaṁ etadavoca: “sakkā nu kho, bhante, bhagavā sandiṭṭhikaṁ dānaphalaṁ paññāpetun”ti? “Sakkā, sīhā”ti bhagavā avoca: “dāyako, sīha, dānapati bahuno janassa piyo hoti manāpo. Yampi, sīha, dāyako dānapati bahuno janassa piyo hoti manāpo, idampi sandiṭṭhikaṁ dānaphalaṁ. Puna caparaṁ, sīha, dāyakaṁ dānapatiṁ santo sappurisā bhajanti. Yampi, sīha, dāyakaṁ dānapatiṁ santo sappurisā bhajanti, idampi sandiṭṭhikaṁ dānaphalaṁ. Puna caparaṁ, sīha, dāyakassa dānapatino kalyāṇo kittisaddo abbhuggacchati. Yampi, sīha, dāyakassa dānapatino kalyāṇo kittisaddo abbhuggacchati, idampi sandiṭṭhikaṁ dānaphalaṁ. Puna caparaṁ, sīha, dāyako dānapati yaṁ yadeva parisaṁ upasaṅkamati—yadi khat­tiya­parisaṁ yadi brāhma­ṇa­parisaṁ yadi gaha­pati­parisaṁ yadi samaṇaparisaṁ— visārado upasaṅkamati amaṅkubhūto. Yampi, sīha, dāyako dānapati yaṁ yadeva parisaṁ upasaṅkamati—yadi khat­tiya­parisaṁ yadi brāhma­ṇa­parisaṁ yadi gaha­pati­parisaṁ yadi samaṇaparisaṁ—visārado upasaṅkamati amaṅkubhūto, idampi sandiṭṭhikaṁ dānaphalaṁ. Puna caparaṁ, sīha, dāyako dānapati kāyassa bhedā paraṁ maraṇā sugatiṁ saggaṁ lokaṁ upapajjati. Yampi, sīha, dāyako dānapati kāyassa bhedā paraṁ maraṇā sugatiṁ saggaṁ lokaṁ upapajjati, idaṁ samparāyikaṁ dānaphalan”ti.
“အသျှင်ဘုရား မြတ်စွာဘုရားသည် ကိုယ်တိုင်သိမြင်ရသော အလှူ၏ အကျိုးကို ပညတ်ရန် တတ်နိုင်ပါ၏လော”။ “သီဟ တတ်နိုင်၏”ဟု မြတ်စွာဘုရားသည် မိန့်တော်မူ၏။ သီဟ ပေးလှူတတ်သော အလှူရှင်ကို လူများစွာတို့ ချစ်ခင်မြတ်နိုးကြ၏၊ သီဟ ပေးလှူတတ်သောအလှူရှင်ကို လူများစွာတို့ ချစ်ခင်မြတ်နိုးကြသော ဤအကျိုးသည်လည်း ကိုယ်တိုင်သိမြင်ရသော အလှူ၏အကျိုးပေတည်း။ သီဟ နောက်တစ်မျိုးကား ပေးလှူတတ်သော အလှူရှင်ထံသို့ ငြိမ်သက်သော စိတ်နှလုံးရှိသည့်သူတော်ကောင်းတို့သည် ချဉ်းကပ်ကြကုန်၏၊ သီဟ ပေးလှူတတ်သော အလှူရှင်ထံသို့ ငြိမ်သက်သောစိတ်နှလုံးရှိသည့် သူတော်ကောင်းတို့ ချဉ်းကပ်ခြင်းဟူသော ဤအကျိုးသည်လည်း ကိုယ်တိုင်သိမြင်ရသောအလှူ၏ အကျိုးပေတည်း။ သီဟ နောက်တစ်မျိုးကား ပေးလှူတတ်သော အလှူရှင်၏ ကောင်းသော ကျော်စောသံသည် ပျံ့နှံ့၍တက်၏၊ သီဟ ပေးလှူတတ်သော အလှူရှင်၏ ကောင်းသော ကျော်စောသံ ပျံ့နှံ့၍တက်ခြင်းဟူသောဤအကျိုးသည်လည်း ကိုယ်တိုင်သိမြင်ရသော အလှူ၏ အကျိုးပေတည်း။ သီဟ နောက်တစ်မျိုးကား ပေးလှူတတ်သော အလှူရှင်သည် မင်းပရိသတ်သို့ဖြစ်စေ ပုဏ္ဏားပရိသတ်သို့ဖြစ်စေ သူကြွယ်ပရိသတ်သို့ဖြစ်စေ ရဟန်းပရိသတ်သို့ဖြစ်စေ ပရိသတ်တစ်မျိုးမျိုးသို့ချဉ်းကပ်ခဲ့မူ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ မျက်နှာရွှင်ပျစွာ ချဉ်းကပ်ရ၏၊ သီဟ ပေးလှူတတ်သော အလှူရှင်သည် မင်းပရိသတ်သို့ဖြစ်စေ ပုဏ္ဏားပရိသတ်သို့ဖြစ်စေ သူကြွယ်ပရိသတ်သို့ဖြစ်စေ ရဟန်းပရိသတ်သို့ဖြစ်စေပရိသတ်တစ်မျိုးမျိုးသို့ ချဉ်းကပ်ခဲ့မူ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ မျက်နှာရွှင်ပျစွာ ချဉ်းကပ်ရခြင်းဟူသော ဤအကျိုးသည်လည်း ကိုယ်တိုင်သိမြင်ရသော အလှူဒါန၏ အကျိုးပေတည်း။ သီဟ နောက်တစ်မျိုးကား ပေးလှူတတ်သော အလှူရှင်သည် ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီး၍ သေပြီးသည်မှနောက်၌ ကောင်းသောလားရာ နတ်ပြည်လောကသို့ ရောက်ရ၏၊ သီဟ ပေးလှူတတ်သောအလှူရှင်သည် ခန္ဓာကိုယ် ပျက်စီး၍ သေပြီးသည်မှ နောက်၌ ကောင်းသောလားရာ နတ်ပြည်လောကသို့ရောက်ရခြင်းဟူသော ဤအကျိုးသည်လည်း တမလွန်ဘဝ၌ ရအံ့သော အလှူ၏အကျိုးပေတည်းဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
Ngồi xuống một bên, tướng quân Sìha bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể trình bày cho con về quả thiết thực hiện tại của bố thí?” Thế Tôn đáp: “Có thể được, này Sìha! Người bố thí, này Sìha, người thí chủ được quần chúng ái mộ và ưa thích. Này Sìha, người bố thí, người thí chủ được quần chúng ái mộ và ưa thích, đây quả bố thí thiết thực hiện tại. Lại nữa, này Sìha! Bậc thiện, bậc Chân nhân thân cận người bố thí, người thí chủ. Này Sìha, bậc Thiện, bậc Chân nhân, thân cận người bố thí, người thí chủ. Này Sìha, đây là quả bố thí thiết thực hiện tại. Lại nữa, này Sìha! Người bố thí, người thí chủ được đồn tốt đẹp truyền đi. Này Sìha, người bố thí, người thí chủ được tiếng đồn tốt đẹp truyền đi. Này Sìha, đây là quả bố thí thiết thực hiện tại. Lại nữa, này Sìha, người bố thí, người thí chủ đi đến hội chúng nào, hoặc hội chúng Sát-đế-ly, hoặc hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng gia chủ, hoặc hội chúng Sa-môn. Vị ấy đi đến với tự tín, không có do dự hoang mang. Này Sìha, người bố thí, người thí đi đến hội chúng nào, hoặc hội chúng Sát Ðế Lỵ, hoặc hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng gia chủ, hoặc hội chúng Sa-môn; vị ấy đi đến với tự tín, không có do dự hoang mang. Này Sìha, đây là quả bố thí thiết thực hiện tại. Lại nữa, Sìha! Người bố thí, người thí chủ, sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi lành, Thiên giới. Người bố thí, người thí chủ, này Sìha, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi lành, Thiên giới. Này Sìha, đây là quả bố thí thiết thực hiện tại.”
Blue Jay ©Ashin Sopāka 2017
Posted in Dhamma	| Tagged dhamma, generosity